Varimi Vokurudzirwa Kuvimbika muKubhadhara Zvikwereti Zvavo
Zvita 30, 2016
Sangano rinomirira varimi reZimbabwe Commercial Farmers’ Union, ZFCU, riri kukurudzira varimi vakawana zvikwanisiro kubva kuchirongwa chehurumende chekubatsira varimi cheCommand agriculture kuti vashandise nemazvo rubatsiro urwu.
Kurudziro iyi inouya zvichitevera yambiro yapiwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa yekuti varimi vanenge vakapfachura zvikwanisiro izvi vachatorerwa matanhoakaomarara.
Mutungamiri weZFCU, VaPaul Zakariya vanoti zvakakosha zvikuru kuti varimi vavimbike sezvo izvi zvichizovabatsirawo mune remangwana kuti vazowana zvakare rubatsiro.
Vamwe varimi vari kupomerwa mhosva yekutengesa mbeu nefotereza zvavakawana kubva kuchirongwa ichi.
Chirongwa ichi chakaparurwa nehurumende pakati pegore nechinangwa chekuti nyika ikwanise kuzvirimira chkafu chinoikwanira. Varimi vanosvika zviuru zviviri vakapinda muchirongwa ichi, murimi oga oga achitarisirwa kukohwa chiuru chematani echibage.
Murimi uyu anozoendesa matanu mashanu pahekita yogayoga kuhurumende senzira yekubhadhara nayo chikwereri chake.
Asi VaZakariya vanoti havaoni varimi vose vachizokwanisa kudzosera zvikwereti izvi nekuda kwezvikonzero zvakasiyanasiyana, zvinosanganisira zvekuti havasi varimiri vose vakawana zvose zvaipiwa nehurumende.